यसकारण कांग्रेस फुट्छ ? – Everest Dainik – News from Nepal
यसकारण कांग्रेस फुट्छ ?
कांग्रेस पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक नेताको खोजीमा आँखा लगाएर वसेका छन देशभरि । को आउला ? कसले मनोबल गिरेको कांग्रेसलाई ऊर्जावान् बनाउला भनेर ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेतृत्व, नीति र रणनीति पराजय भएपछि सभापति र महामन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि संस्कार बसाउने जिम्मेवारी रामचन्द्र र उनका सहयोगीहरूको काँधमा आएको छ ।
गगन थापा युवा छन्, तेजिलो र संवाद शैलीमा प्रभावकारी पनि छन् । उनी कांग्रेसभित्र अहिलेको संविधान र रूपान्तरित नेपाली राजनीतिको सच्चा प्रतिनिधि पात्र हुन् । स्थापित एक मात्र कांग्रेस नेता गगन नै हुन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।
मातृका प्रसाद र राजा दक्षिणपन्थी बाटो हिँड्न रुचाएपछि विपी कोइरालाले क्रान्तिको सान्दर्भिकता र उद्देश्य जोगाउन आफ्नै दाजुविरुद्ध पनि अभियान चलाएका थिए । आज कांग्रेसभित्र त्यस्तै परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ ।
कांग्रेस पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक नेताको खोजीमा आँखा लगाएर वसेका छन देशभरि । को आउला ? कसले मनोबल गिरेको कांग्रेसलाई ऊर्जावान् बनाउला भनेर । द्विविधाविना नै भन्न सकिन्छ, प्रस्ट नीति, उद्देश्य र कार्यक्रम लिएर देशभरिका कार्यकर्तालाई सुमसुम्याउन पुग्नेले भावी नेतृत्व लिनेछ कांग्रेसको । -अनलार्इनखबरबाट